Wararka Maanta: Isniin, Aug 19, 2020-Wiil Sooomaaliyeed oo Maraykanka Tartan Quraan ku guulaystay $10,000 oo cash ah & Gaari 2020 Toyota Highlander ah
Arbaco, Agoosto 19, 2020 (HOL) -Minnesota waxaa lagu soo gabagbeeyey tartan quraan oo uga socday in ka badan 450 arday oo ka kala yimi goboladda maraykanka ,
Tartankaan Imaam Shatibi ayaa sanad walba lagu qabtaa gobolka Minnesota waxaanu sanadkaan noqday kii lixaad ee loo qabto ardayda baranaysa Quraanka kariimka ee ku dhaqan waqooyiga America.
Iyadoo xilgaan adag ee Covid 19 uu jiro ayaa tartankaan loo qabtay nidaamka duwan sidii hore loogu qaban jiray , waxaana saacad walba imaanayey in ku dhow 10 qoys oo uu ardaygoodu markaa imtaxaanka maraayo.
Tartankaan imaam shatibi ayaa sanad walba ardayda ay ku tartamaan dhawr qaybood oo kala ah Juska kowaad ee quraaanka oo ay ka qaybgalaan arday aad u d’a yar 5 jus , 10 Jus, 15,jus iyo 30 Jus oo sanadahaan loo kala saaray wiilal & gabdho
Tartankaan oo socday lix cisho ayaa habeen hore lagu soo gabgabeeyey goobtii uu ka socday ee John F. Kennedy High School .
Sanadkaan waxaa xiiso lahaa in abaalmarino kala duwan oo qaaliya ay ardaydu si lama filaan ah ugu guulaysteen,waxaa xusid mudan in ardayda gabdhaha ah ee ka qaybgalay Juzka 1aad & 5aad ay sanadkaan heleen gabadh walba oo tartanka qayb ka aheed waxay heshay silsilad dahaba oo magaceeda lagu xardhay.
Sanad kasta ardayda kaalimaha hore gala waxaa lagu abaalmariyaa lacag kala qiimo duwan & safar lagu geeyo magaalooyinka baraysan ee makah al mukarama & m,adina oo ay ku soo gutaan cumrada sandkaas
Hadaba sanadkaan 2020 waxaa dhanka gabdhah ku guulaytay Raxma Qaasim Maxamed oo heshay $10,000 (toban kun) oo lacagta Dollarka Maraykanka ah dhanka Wiilashana waxaa helay Cabdulahi Bashir Maxamed oo tartankaan 2015kii ku bilaabay in kaga qayb qaato tartanka qaybta 5 Jus, Cabdulaahi sanadkaan waxuu helay kaalinta kowaad , intaa kadib waxaa tartan aan lagu kala saarayo raxma & Cabdulahi ayaa goobta ka dhacay waxaan Cabdulaahi Bashir uu ku guulaystay Baabuur Cusub oo qiimo ahaan dhan $40.000 oo dollar , waxaana lagu wareejiyey furaha gaarigaas abdulaahi,
Waxyaalaha sanadkaan aadka u qiimo badnaa waxaa ka md ah in hal gabar oo ganacsato ah ay baxisay abaalmarinta lacageed ee helaan gabdhaha tartanka sodonka jus ku guulayta oo dhan labaatan kun oo dollar Amalina oo suuqa Karmel ku leh dukaan ayaa ku deeqday lacagtaas sanadkaan.
Tartaankaan qarashaadka ku baxa waxaa baxiya shaqsiyaad is xilqaamay oo ku nool Maraykanka iyo dalal kale, waxaana la oron karaa waa mashruuca ugu wayn ee ay si iskaa wax u qabso ah u hogaamiyaan dadka Soomaaliyeed ee Minnesota dagan.